Filtrer les éléments par date : samedi, 07 décembre 2019
samedi, 07 décembre 2019 22:38
Herinaratra - Tetikasa « Sahofika »: Tontosa ny fakan-kevitra teto Vakinankaratra
Tontosa tao amin’ny tranompokonolona Antsirabe ny fakan-kevitra rezionaly ho an’ny fanorenana fotodrafitrasa goavana hamokarana herinaratra ao amin’ny riandranon’i Sahofika, ao amin’ny Kaominina Belanitra, Distrikan’Antanifotsy.
Hamokatra herinaratra hatrany amin’ny 200 MWatt ity foibe ity, izay ao Belanitra no hanorenana ny tohodrano, ary any amin’ny Fokontany iray any Anosiben’Ala no hanorenana ny foibe fanampariahana ny herinaratra.
samedi, 07 décembre 2019 22:19
Frantsa : Nihaona i Ravalomanana-Rajaonarimampianina
Nihaona tany Paris Frantsa, androany, ny filoha teo aloha isany Marc Ravalomanana sy Hery Rajaonarimampianina.
samedi, 07 décembre 2019 20:23
Trangam-piarahamonina: Vehivavy, bevohoka 3 volana maty nisy namono
Vehivavy iray, mbola tanora vao 22 taona, no maty nisy namono tamin'ny fomba feno habibiana tao an-tranony ny Alakamisy 5 desambra manodidina ny mitataovovonana tany ho any. Tsindrona vy maranitra nanandrify ny fony no nahafaty ilay vehivavy.
Tsy fantatra hatreto izay nahavanon-doza satria ilay vehivavy sy ny zanany kely vao 3 taona no tao an-tranony ka tsy nisy nahare izay zava-nitranga. Ny fianakavian'ilay vehivavy tonga hitady azy no ankona raha nahita azy efa nivalampatra teo am-pandriana raha ny nambaran'ny lehiben'ny Fokontany Ambohipeno, Kaominina ambonivohitra Antsirabe, ary ireo no nampandre ny Fokonolona.
Nentina teny amin'ny hopitaly saingy efa tsy nisy fiala-nenina azo natao intsony.
samedi, 07 décembre 2019 20:05
Antananarivo Renivohitra: Kamiao 40 no ahetsiky ny faritra Analamanga hanalana ireo fako miavosa
Hampiasa kamiao miisa 40 sy fitaovana vaventy miisa 4 ny Faritra Analamanga hanesorana ny fako misavovona eto an'Antananarivo renivohitra.
« Tsy hijanona ny asa raha tsy voadio sy voaala avokoa ireny fako ireny », araka ny nambaran’ny Governora Hery Rasoamaromaka, nandritra ny fidinana ifotony nataony teny Namontana, Boriborintany faha-4, Antananarivo Renivohitra.
samedi, 07 décembre 2019 19:58
Toamasina: Nisy nangalatra ny tarobian-jiro mirefy 2 km an’ny JIRAMA
Tarobian-jiro mirefy 2 km, izay mitondra ny herinatra avy any Volobe mankao Toamasina no nisy nangalatra, ny zoma 06 desambra tokony ho tamin'ny 1 ora maraina.
Tsy mbola tomombana ihany koa ny milina mpamokatra herinatra an'ny ENELEC, izay tsy manome afa-tsy 4,5 MW raha tokony ho 16 MW izany.
Mbola ahiana noho izany ny hisian'ny fahatapahan-jiro mifandimby aty Toamasina satria tsy misy afa-tsy 19,5 MW ny herinatra afaka vatsiana ho an'i Toamasina vokatr’ireo olana ireo, raha toa ka 27,95 MW ny filana ambony indrindra amin'ny ora be mpampiasa.
samedi, 07 décembre 2019 19:55
Fifidianana kaominaly: Hivoaka amin’ny alatsinainy 9 desambra vokatra vonjimaika ho an’ny Faritany Antananarivo
Nifarana omaly zoma 06 desambra ny fampitahana taratasy fitanana an-tsoratra ny latsabato ho an'ny rafitra mikirakira ny voka-pifidianana kaominaly ho an'ny Faritanin'Antananarivo.
Ny alatsinainy 9 desambra izao no hamoaka vokatra vonjimaika feno ny eto amin'ny faritanin'Antananarivo. Hatao eny amin’ny foiben’ny CENI eny Alarobia ny lanonana mikasika izany.
Samy ho amin'io herinandro ho avy io avy ihany koa ny famoahana voka-pifidianana an'ireo Faritany 5 hafa.
samedi, 07 décembre 2019 14:22
Fifidianana Kaominaly: Hametraka fitoriana eny amin’ny Tribonaly administratifa ny TIM
Hametraka fitoriana manolona ireo hosoka sy fandikan-dalana tamin’ny endriny samihafa nandritra iny fifidianana kaominaly natao ny 27 novambra 2019 iny, eny amin’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana na Tribonaly administratifa ny antoko Tiako i Madagasikara amin’ity andron’ny sabotsy 7 desambra ity.